Shirweynaha haweenka ku hadla Af-soomaaliga ee gudniinka hablaha oo Garowe ka furmay. – Radio Daljir
Garowe, January, 10 ? Waxaa maantay magaalada Garowe si rasmi ah uga furmay shirwaynaha haweenka ku hadla Af-soomaaliga, kaasi oo looga hadlayo gudniinka hablaha iyo dano kale oo badan.
Shirkaan oo ay kasoo qayb-qaateen haween kor u dhaafaya illaa boqol ayaa ka kala yimid dalalka Ethiopia, Jabbuuti, iyo Kenya, waxaana maantay uu si rasmi ah uga furmay xarunta PDRC, kaasi oo si gaar ah looga hadli-doono 2-da maal-mood ee uu socda danaha haween-waynaha Soomaaliyeed, gaar ahaan gudniinka habla waxyeelada u gaysta.
Shirkaan ayaa waxaa maantay furtay marwada madaxwaynaha dawladda Puntland Marwo Aamino Abiib, waxaana ay tilmaamtay haddii aysan haweenku tashan, inaan cidna u maqnayn, ceel-na u qodnayn, loona baahan-yahay haweenku meel-kata oo ay joogaan inay danahooda ka shaqeeyaan, waxaa ay intaasi ku dartay marwada madaxwaynuhu in shirkaan uu ahmiyad gaar ah u leeyahay haween-waynaha Soomaaliyeed, maadaama gudniinku uu saamayn daran ku yeesho nolasha hablaha Soomaaliyeed.
Intaasi kaddib waxaa iyanaha halkaasi ka hadashay wasiirka hormarinta haweenka iyo qoyska DFKS marwo Maryan Aways Jaamac, waxaana ay tilmaamtay in loo baahan-yahay shirkaan inay kasoo baxaan qodobo taariikhda haweenka Soomaaliyeed wax-ka badala, inkastoo ay xustay dhibka haweenka lagu hayo inuu yahay mid aad u badan.
Shirkaasi oo socon-doona muddo 2 maa-maad ah ayaa laga galay maantay wajigiisii 1-aad waxaana ujeedooyinka lagu jeex-jeexayo sharaxaad aad u dheer ka bixisay wasiirka hormarinta haweenka iyo arrimaha qoyska Puntland marwo Caasho Geele Diiriye, waxaana ay sheegtay in shirkaan uu yahay mid si gaar ah looga hadli doono danaha haweenka Soomaailyeed, gaar ahaan gudniinka habla waxyeeleeya.